5 कलात्मक प्रवृति जुन आज डिजाइनमा एक प्रवृत्ति हो क्रिएटिव अनलाइन
Art कलात्मक प्रवृति जुन आज डिजाईनमा चल्दै छन्
यदि हामीले ग्राफिक डिजाइनको बारेमा कुरा गर्नुपर्‍यो जुन आज प्राय: प्रायः देखा पर्छ र त्यसले आजको रचनात्मक दिमाग (सामान्य सर्तहरूमा) प्रतिनिधित्व गर्दछ ... तिमी के भन्छौ? तपाईको कलात्मक प्रवाहलाई तपाईको बानीका बारे, परिचितको रूपमा र वर्तमान सौन्दर्य दृश्यमा के मान्यता पाउनुहुन्छ?
अब हामी पाँचवटा आन्दोलनहरू हेर्न जाँदैछौं जुन आजको ग्राफिक डिजाइनरलाई राम्रो प्रतिनिधित्व गर्दछ।
न्यूनतमता: सार भनेको के हो भने कुनै तत्वको पहिचान परिभाषित गर्छ र यसले मूल्य र गुणलाई के दिन्छ कि जुन आवश्यक छैन त्यो सबै अनावश्यक, बोझ, लगभग अवरोध हो। न्यूनतम अवधारणा पहिलो पटक १ min .० को दशकमा मनोवैज्ञानिक रिचार्ड वोल्हेमको ओठमा प्रयोग भएको थियो। उनको शब्दको प्रभाव स्पष्ट थियोः कुनै पनि वस्तु जसमा धेरै उच्च बौद्धिक सामग्री थियो तर कम औपचारिक सामग्री कम थियो। यस कलात्मक प्रवृतिको केही उल्लेखनीय विशेषताहरू संरचनात्मक शुद्धतामा अमूर्त, अर्थव्यवस्था, सटीक र प्राथमिक ज्यामिति सीमा हुन्। सबै चीज न्यूनतम ठाउँमा ध्यान केन्द्रित भएको देखिन्छ आफूलाई वस्तुको रूपमा परिभाषित गर्नका लागि। हाल ग्राफिक र वेब डिजाइन मा न्यूनतमवाद को स्पष्ट अभिव्यक्ति फ्लैट डिजाइन हो। यो आन्दोलन तीन आयामी, विवरण र बारीक संग वितरण। सबै चीजहरू स्पष्ट निर्माणमा भेला हुन्छन्, शुद्ध र withहरूसँग र केवल र मात्र विशेष आधार तत्वहरूको प्रयोग गरेर।
रेट्रो र पुरानो: दुबै धारहरू विगतको समयमा देखा पर्दछन् र पुरातन समयमा शासन गर्ने कलात्मक मोडेलहरूको पूजा गर्छन्। विन्टेज शब्दको व्युत्पत्तिक उत्पत्ति ल्याटिन शब्द “भिन्डेमिया” को विकासबाट आएको हो र यो सब भन्दा पुरानो र उच्चतम मदिरालाई बुझाउन प्रयोग गरिएको थियो। यो शब्द उत्परिवर्तन गरियो र फेसनको सीमाहरू पार गर्‍यो, नयाँ अर्थ प्राप्त गर्दै: फर्निचर, वार्डरोब वा कुनै पनि प्रकारका सामानहरू जुन ती कम्तिमा पनि बीस वर्ष पुरानो थिए र उनीहरूको डिजाइन गरिएको क्षणको मूल्य सौन्दर्यले प्रदान गर्दछ। प्रामाणिक अवशेष बन्नुहोस्। विगतका खजाना। तर रेट्रो शब्द पुरानो शब्दसँग मिल्दोजुल्दो छ, यद्यपि उनीहरूसँग धेरै साझा विशेषताहरू छन्, ती साँच्चिकै फरक छन् र बिभिन्न चलनहरूलाई बुझाउँछन्। पुरानो तत्वहरू ती सबै कार्यहरू हुन् जुन कुनै पनि प्रकारको संशोधन प्राप्त नगरीकन विगतबाट आउँदछन्, कम्तिमा उनीहरूले प्रमुख परिमार्जन गरेका छैनन्। यी अन्य युगका रचनाहरू हुन् जुन सुरक्षित गरिएको छ र राम्रो मदिरा जस्तै, समयले उनीहरूलाई अधिक र अधिक मूल्य दिईरहेको छ। रेट्रो सिर्जनाहरू वा रचनाहरू हालका सिर्जनाहरू हुन्, हालका प्रक्रियाहरूसँगै गरिन्छ तर पुरानो समयमा सिर्जना गरिएका दिशानिर्देशहरू वा मोडेलहरू अनुकरण गर्दै। यस तरीकाले, सबै ग्राफिक प्रस्तावहरू जुन हामी विस्तृत रूपमा डिजाइनरहरूको रूपमा विस्तार गर्दछौं। यी प्रवृत्ति फोटोमनिपुलेशन र फोटोग्राफीको विश्वमा तीनै उपस्थित हुन्छन् जुन उनीहरू वेब डिजाइन, लेटरि and र रूपरेखामा छन्।
घनत्व: यो बीसौं शताब्दीका सबै अवन्त-गार्डहरूको उत्पत्ति हो र सत्य यो हो कि यो आफ्नो उपस्थितिबाट नै छोटो शब्दहरूमा बोल्न छोडेको हो जुन आधिकारिक रूपमा अघिल्लो कलात्मक चक्रको साथ ब्रेक घोषणा गर्न। कुनै चीज र कुनै पनि कार्यको प्रतिनिधित्व गर्न क्युबको निरन्तर प्रयोगको कारणले यो क्युबिस्मको रूपमा बप्तिस्मा लिइएको छ। बहु दृष्टिकोण यो नयाँ कलात्मक युगको मौलिक स्रोत हो। वस्तुहरूका सबै भाग र अनुहार एकैसाथ प्रतिनिधित्व हुन्छन्, त्यो हो, यसका बारे जान्ने सबै कुरा समान विमानमा देखाईन्छ। यो वैज्ञानिक र प्राविधिक पक्ष एकदम चाखलाग्दो छ किनकि यसले कलाको साथ पूर्ण प्रयोगात्मक दृष्टिकोणबाट काम गर्दछ र यसले कुनै प्रकारले समानान्तर ब्रह्माण्ड र कलाको नयाँ अवधारणाको ढोका खोल्छ। र यो यो परिप्रेक्ष्य अझै पनि धेरै डिजाइनमा मान्य छ, कि यो यसको गुणवत्ता को अकाट्य प्रमाण हो। बितेको समयको बावजुद, तिनीहरूको रेकर्ड र योगदानहरू सबै प्रकारका प्रस्तावहरूमा एक प्रवृत्ति हुन जारी रहन्छ। हामी पिकासो, ब्लान्चार्ड, ब्रेक वा ग्रिसको कुनै पनि प्रकारको काममा पाउन सक्दछौं: मूर्तिकला, सिनेमा, विज्ञापन पोस्टरहरू ...
अतियथार्थवाद: यो २० औं शताब्दीको सबैभन्दा आकर्षक कलात्मक भ्यागुअर्डमध्ये एक हो। बोस्को वा गोया जस्ता तथ्या .्कहरू पछाडि सर्भेर्लिज्म शब्दका लागि मार्ग प्रशस्त पार्ने काममा थिए। महान् शिक्षक गोयाको भनाइले यी सबैलाई राम्रोसँग परिचय गराउन सक्दछ। "कारणको सपनाले राक्षसहरु उत्पन्न गर्दछ"। तर कहिले हामी हाम्रो कारण सुत्न र सपना दिन्छौं? जब हामी विज्ञान, समाज र परम्परा द्वारा स्थापित नियमहरु बाट आफूलाई अलग गर्न को लागी अनुमति दिन्छौं? हुनसक्छ त्यो स्वतन्त्रता सपनाहरूले गर्दा हामी भित्र भएको वास्तविक सृजनात्मक राक्षसको खाना हो। वास्तविकता र तर्कको बिरूद्ध विद्रोह यी सबै पूर्वजहरूले हामीलाई छोडेको सबैभन्दा ठूलो विरासत हो। कारण अचानक मानव सीमान्तिक स्थितिमा सीमित राखी यसलाई घटाएर मानिसहरुको सबैभन्दा ठूलो शत्रु बन्ने देखिन्थ्यो। यो एक क्षण हो, जहाँ काल्पनिक को मनोरञ्जन र कल्पना को महत्त्व क्यानभ्यास, सिनेमा र कला हावी। सपनाको बेतुकापन र तर्कहीन संसार सबै प्रकारका प्रस्तावहरू समायोजित गर्न प्रतिनिधित्व गर्दछ, तथापि उनीहरू आश्चर्यचकित देखिन्छन्। आज यो फोटोमानिपुलेशन, चित्रण र ती क्षेत्रहरूमा अझ बढी स्वतन्त्रता प्रकट गर्दछ जुन बढी स्वतन्त्रता प्रदान गर्दछ र औपचारिकता र शिक्षाविज्ञानको कम विषय हो।
हिपस्टर: केही तरिकाले, हामी भन्न सक्छौं कि hipster आन्दोलन अघिल्लो प्रवाहका केही लक्षणहरूको मिश्रण हो। वर्तमान वा हिपस्टर आन्दोलन आजको युवा दृश्यको सबैभन्दा प्रतिनिधित्व हो। सुरुमा यो स्वतन्त्र संगीतसँग सम्बन्धित थियो तर प्रायः जसो यो अवधारणा अन्त हुन्छ जुन कला र रचनात्मक संसारको अन्य क्षेत्रहरू समेटेको छ। यदि हामी यसको मुख्य विशेषताहरूको बारेमा कुरा गर्छौं भने, यो एक्लेक्टिक हो र वैकल्पिक पोस्टवार आन्दोलनहरू जस्तै बीट्निक, हिप्पी, गुंडा र ग्रन्जले प्रस्तुत गरेको सामग्रीको एक राम्रो हिस्सा ल्याउँछ। ग्राफिक डिजाइनमा यो रेट्रो तत्व, न्यूनतावाद, अतिवादीवाद र सायद क्युबिज्मको हातले प्रकट गर्दछ, यद्यपि थोरै हदसम्म।
लेखको पूर्ण मार्ग: अनलाइन रचनात्मक » सामान्य » कलाकारहरू » Art कलात्मक प्रवृति जुन आज डिजाईनमा चल्दै छन्
प्रकृति बारे +२० नि: शुल्क संसाधन
+20 आमाको दिनको लागि संसाधनहरू